Muurayi waBridgett Frisbie: Nyaya Yokudzidza
Anouraya Asingafungi weChikoro cheChikoro cheChikoro cheMakore 17
Bridgett Frisbie aiva nemakore gumi nemashanu uye mugore rake guru paRaines High School muKaty, Texas , apo akange akwegura munzvimbo inenge ine matanda kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweHarris County ndokuurayiwa neshamwari yepedyo uye wechikoro.
Maererano nezviremera, pakati peusiku musi waApril 3, 2011, Bridgett Frisbie akabuda mumba make kuzosangana neshamwari uye akanga achifamba pasi mumugwagwa paakaonekwa naAlan Perez naAlex Olivieri avo vakanga vari kunze kumutsvaka muOrivieri Chevrolet Suburban .
Varume vaviri vakanga vakagadzirira "kumutsamwira (Frisbie)" usiku ihwohwo uye akanga agadzirira zvakakodzera. Vose varume vacho vakanga vakashonga pfuti uye Perez akanga akapfekedzwa vose vemavara uye akanga ane masikati masikati masikati. Apo varume vacho vakaona Frisbie, Perez akavanza muchigaro chekumusoro chemotokari pasi pemurwi wemavheketi, maererano neurongwa hwavo.
Inotyisa Kumangwana Yake
Frisbie naOrivieri vaiva shamwari dzakanaka , saka akanga asina chikonzero chokurega kubvuma kubva kwaari usiku ihwohwo. Vatambudzi vanotenda kuti haana kuziva kukosha kwehasha Olivieri akanzwa kwaari nekuda kwechiitiko chakaitika chaakaona uye achitaura pamusoro neshamwari kuchikoro.
Mavhiki mashomanana zvisati zvaitika, sekunzwirwa nyasha naFrisbie, Olivieri aiti akamboita motokari-nekupfura kumusha wake wepambani ne Yugo semiautomatic pfuti. Maererano naPerez, Olivieri akamuudza kuti Frisbie akanga achifambisa paaipfira imba yekare yekomana nemabhuru. Akati Olivieri ainetseka kuti, kana akasungwa nekuda kwekupfura, zvingakuvadza zvirongwa zvake zvemangwana rekuita basa muArmed.
NaFrisbie muMuguta rePurban naPerezi vachivanza vasingaoneki muchigaro chemashure, Olivieri akaendesa kunzvimbo yehuni pasi pekunyengera kwenhema yekuda kuwana chinhu chaakaviga. Kutakura foshoro, iye naFrisbie vakapinda musango. Perez akatevera vaviri ava ari kure uye akatarisa sezvo Olivieri akaisa ruoko rwake pamusoro pomufudzi waFrisbie, akabva atora pfuti yake ndokumupfura mumutsipa wekumutsipa , achimuuraya pakarepo.
Pakazosvika 3 am Perez naOrivieri vakafambisa kuenda kuguta reHouston kunotora mukomana waFrisbie, Zacharia Richards, kubva kuGreyhound bhasikoro. Maererano naPerez, musangano we Richards muHouston waizoenda kune chikamu chevana vaviri kana vakabvunzwa.
Musi waApril 3, 2011, mutumbi waBridgette Frisbee wakawanikwa munzvimbo yehuni neboka revana vakanga vari kunze vakatasva mabhasi.
Tsvakurudzo yekona yakashandurwa imwechete 9 mm shell casing munharaunda yemuviri waFrisbie. Apo nyaya dzekuponda dzakasunungurwa, Olivieri akanyora-kutumira Perez uye akazvifananidza kuva kumuudza kuti shamwari yavo yakanga yawanikwa yafa.
Kureurura kuti Usakanganiswa
Mazuva mashomanana mushure mekuwanikwa kwemuviri waFrisbie, Perez, kuburikidza negweta remhosva, akabatana nemapurisa maererano nehuwandu hwaaiva nawo pamusoro pekuponda. Pane imwe nguva paakabvumirwa kusungirwa mhosva, Perez akareurura kune zvaaiziva pamusoro pekuponda, kusanganisira kufungidzira Olivieri semukurudzira.
Perez akazopupurira mudare kuti chirongwa chacho chakanga chiri "kukurumidza" Frisbie, asi kuti akanga asingazivi nezverongwa hwaOrivieri hwokumuuraya uye, mushure mokudhinda, vaviri vacho vakashandura mashoko akafuridzira mumatanda.
Perez akaudza dare kuti, "Akauya achimhanyira kwandiri, uye ndakashamiswa nekuti akamurova."
Akatsanangura mafungiro eOvivieri mushure mekuponda shamwari yake yenguva refu se "asingatendeuki" uye kuti haana kuratidzira zviratidzo zvekuzvidemba. Perez akabvumawo kutevera mirairo yaOrivieri usiku ihwohwo, kupfekedza zvipfeko zerima uye chiso chakakwana chechifukidzo, kuunza chipfuti, uye kuvanza pasi pemukati wezvenguvo kumashure kweChevrolet Suburban.
Alexander Olivieri akawanikwa ane mhosva yekutanga kuponda uye akapiwa mutongo kwemakore makumi matanhatu mujeri. Yakatora jeri iri pasi peawa mana kuti asarudze pamutongo waOrivieri.
Baba vaBridgett Bob Frisbie, avo vakamutora paakanga ari muduku, vakatsanangura mukunda wavo sekuti dzimwe nguva vanopandukira, asi kuti akanga aita zvakawanda muhupenyu hwake hutsva, kusanganisira kurasikirwa naamai vake vanorera nekuda kwekurwara. Akataura kuti zvaakaona paakatarisa mwanasikana wake aive anofara-ane makore ane makore 17 uyo aida nhetembo uye kutora uye aiva mwanasikana ane rudo.
Mutemo waOrivieri wakapomerwa nekuda kwemibvunzo mitatu, yakataurwa pasi apa kubva pamapepa ematare akaiswa nevatsigiri vake vekuzvidzivirira:
Nyaya Yokutanga: Dare rekutongwa rakaita kukanganisa kukanganisa mukuramba chikumbiro chomudziviriri wekuzvidzivirira kurayira jeri kuti Alan Perez aive chapupu chekupupura semhosva yemutemo.
Maererano nepepeti yake, neupupuri hwaPerez pachake, akanga apinda muchirongwa chekuita mhosva, izvo zvakaguma nokufa kwemupomera. Kana kupupura kwaPerez kuchiitwa sechokwadi, saka hapana mubvunzo waakaita mubasa rekuita mhosva raaizopiwa mhosva dai asina kupiwa mishonga. Perez aiva, saka, sangano sechinhu chemutemo.
Nyaya Yechipiri: Hapana uchapupu hwakakwana hwakaratidzwa kuti hutsigire uchapupu hwaAln Perez, chapupu chekubatsira.
Mutori wenhau waOrivieri akataura kuti kubatana kwehumwe uchapupu hwehuchapupu hunoda uchapupu hunoita kuti hubatanidze munhu anopomerwa nemhosva yakaparwa. Hakuna humwe humwe uchapupu huripo mukutongwa hunoita kuti hubatanidze Olivieri kune kuurayiwa kwemugunun'una nokuda kwechinangwa chokubatanidza uchapupu hwaPerez.
Nharo Nhatu: Kubvumirwa kutsvaga kwakapiwa kumutemo kwekutongwa naSamuel Olivieri hakuna kupiwa nokuzvidira uye naizvozvo hazvina kukodzera.
Maererano nechikumbiro chemapurisa, mapurisa akanga asina chibvumirano chekutsvaga Guta reMugodhi rinotungamirirwa naOrivieri, pasinei nekuziva kwaakaitwa kare kubva kuPerez kuti inogona kuva neuchapupu. Sezvo nzira yakapoteredza zvido zvekuita, mapurisa akatsvaka uye akagamuchira kubvumirwa kwababa vaOrivieri kutsvaga motokari.
Kubvumirwa kwababa vaOrivieri kwakanga kusingabatsiri, sezvo akanga asingazivi kuti aiva nekodzero yokuramba kubvumirana, akanga aiswa pasi pekuratidzira kwakasimba kwevane simba kuburikidza nemitemo yepamutemo, uye akanga achishanda ane zvishoma zvisingakwanisi pfungwa dzepamusoro mushure mokunge avharwa 2 ndiri mapurisa.
Dare reKutsvaga reRuwa Rokutanga reTexas rakapinda mazano matatu uye rakabvumira kutsigira dare rekutongwa.
Alex Olivieri iye zvino anogara paConnally (CY) Correctional Institution muKenedy, Texas. Zuva rake rokubudiswa rakarongwa munaNovember 2071. Achave nemakore 79.
Mhosva dzeSerial Muurayi Gary Michael Hilton
Nhoroondo ya Diane Downs
Mhosva dzeMuurayi weKiller Karla Homolka naPauro Bernardo
Amy Archer-Gilligan uye Muranda Wake Wakauraya
Nhoroondo dzeNyaya Dzakashata Mhosva dzeMurume
Mhosva yePamhosva: Debra Evans Case
Uyu "Munhu Wakazvimirira" Wemazuva Ekupedzisira Mafirimu
Top Classic Rock Instrumentals
Kunyora Mitsara yeVatangi
Top 6 Asanas kana Yoga Poses
Spectroscopy Tsanangudzo uye Kusiyana Kubva kuSpectrometry
Kurova Gorofu Gorofu Kurudyi Kwezvinodiwa asi Patsika Yakarurama
Ita Ammonium Nitrate kubva kuMakemikari Emhuri
Popular Mystery Novel Series
Nzira Yokudhonza Dhamu Zvakarurama Pasina "Poked, Jab Stroke"
Top 10 Zvishandiso zveThii zveVadzidzi K-5
Dolphin Fishing uye Trolling
Tsanangudzo uye Mienzaniso ye "Oo" uye 'Da' muchiGermany
Pakushandisa Kushandura Maitiro
KRAUS - Surname Zita uye Mhuri Nhoroondo
8 Paintball Zvipfuti Zvishoma Kupfuura $ 150
Bhaibheri Rinoti Chii Nezvokunwa Doro?
Chaur Sahib Kunotsanangurwa: Whisk Waving High Over Head
Ndeapi Unyanzvi Hwandinoita Kuti Ndidzidze Physics?
21 Zvisingakanganwiki Zvinyorwa Kubva 'Zvose Zvakanyarara paWestern Front'
Bhuku Rekudzidza Mazano
Mutemo weSaric uye Kubudirira Kwemadzimai
Mambo wechiGiriki Agamemnon Akafa Sei?